Darpan Nepal – तराई द्रुतमार्गको डीपीआर : कम्पनी छनोट अन्तिम चरणमा !
तराई द्रुतमार्गको डीपीआर : कम्पनी छनोट अन्तिम चरणमा !
Sep 02, 2018adminNews Paper0Like
काठमाडौं : काठमाडौं–तराई दुर्तमार्गको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) का लागि कम्पनी छनोट प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ। नेपाली सेनाले दु्रतमार्ग बनाउन प्रस्ताव मागेका ६ वटा कम्पनीमध्येबाट दुईवटा छनोट गरिसकेको छ। नेपाली सेनाका प्रवक्ता गोकुल भण्डारीले अन्तिम दुईमा रहेका कम्पनीबाट एउटालाई दु्रतमार्गको डीपीआर बनाउने जिम्मा दिने तयारी भइरहेको जानकारी दिए।उनका अनुसार विभिन्न ६ वटा कम्पनीले डीपीआर बनाउने प्रस्ताव पेस गरेका छन्। यसमध्येबाट दुईलाई पहिलो चरणबाट छनोट गरिएको छ। छनोटमा परेका दुईवटा कम्पनीको पनि प्रस्ताव मूल्यांकन भइरहेको छ। ‘आगामी साता द्रुतमार्गको अहिलेसम्मको अवस्था र डीपीआर बनाउन छनोट भएको कम्पनी सार्वजनिक हुनेछ’, भण्डारीले अन्नपूर्णसँग भने।
नेपाली सेनाले द्रुतमार्गको डीपीआर बनाउन माग गरका ६ वटा कम्पनीमध्येबाट प्राविधिक र आर्थिक रूपमा दुईवटा मात्रै योग्य ठहरिएका छन्। यसमध्ये पनि एउटालाई छनोट गरेर मात्रै नाम सार्वजनिक गर्ने जानकारी पनि भण्डारीले दिए। यसअघि भारतीय कम्पनीले बनाएको डीपीआरअनुसार यो मार्ग बनाउन करिब एक खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँको प्रारम्भिक लागत अनुमान गरिएको थियो। विश्व बैंकले गरेको प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार नै नेपाली सेनाले बाटो बनाउने काम अगाडि बढाइरहेको छ। डीपीआर अगाडि नै बाराको आठ किमि दूरीमा माटो भर्ने काम भइरहेको छ।..
Previous Postसिंगापुरले दियो नेपाललाई १ सय ५२ रनको लक्ष्य ! Next Postलगातारको वर्षासँगै आएको बाढीका कारण सिन्धुलीको दुधौली खोलाको पुल भासियो!